Wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato xarunta cimilada | Saadaasha Shabakadda
Markii laga hadlayo saadaasha hawada iyo cimilada dhulka, astaamahan waxaa lagu soo uruuriyay aalado duubi kara xogta. Xogta xiisaha loo qabo in la qeexo saadaasha hawada ama cimilada dhulka waa isbeddelada saadaasha hawada ama sidoo kale loo yaqaan ilaaliyayaasha cimilada. Qiyamka doorsoomayaashaas waxaa lagu darsaa, lagu cabiraa laguna ururiyaa Saldhigga Cimilada. Maaha wax kale oo aan ahayn aalad awood u leh inay soo ururiso dhammaan doorsoomayaasha cimilada ee xiisaha u leh saadaasha hawada aag.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa maxay yihiin astaamaha ugu waaweyn, codsiyada iyo noocyada saldhigga cimilada ee jira. Intaas waxaa sii dheer, waxaad ogaan doontaa muhiimadda ay u leeyihiin aqoonta saadaasha hawada.
2 Noocyada xarunta cimilada
2.1 Saldhigyada cimilada gudaha
2.2 Xarumaha xiriirka PC
2.3 Xarumaha cimilada ee Wifi
2.4 Saldhigyada cimilada ee la qaadan karo
3 Qalabkee buu leeyahay rugta cimilada
Waa qalab lagu rakibi karo dhul kasta iyo meel kasta oo adduunka ah. Waxaad u baahan tahay shuruudo gaar ah si aad u fuliso cabirka sida ugu macquulsan, laakiin ma aha shuruudaha aad u adag ee la buuxiyo. Si loo cabiro dhamaan doorsoomayaasha cimilada, hal aalad kuma filna, maadaama ay muhiim tahay in la qiimeeyo baaxada qaladka cabirka. Suurtagal ma aha in laga tago dhammaan kalsoonida lagu aaminay waxa ka dhigaya hal aalad cabbir.
Sababtaas awgeed, aagga dhulka loogu talo galay rakibaadda qalabka saadaasha hawada ee kala duwan waxaa loo yaqaan beerta saadaasha hawada. Faa'iidada xarunta saadaasha hawada waa mid aad u saraysa waana ku mahadsan tahay, xog aad u qiimo badan ayaa la heli karaa. Hawlaha ugu caansan ee la yaqaan waxaan haynaa waxyaabaha soo socda:
Ogow xaaladaha cimilada goobta ay ku taallo.
Inaad awood u yeelatid inaad isbarbar dhig ku sameysid idaacadaha kale ee kuyaala meelaha u dhow si aad u aragto sida xogta u kala duwan tahay una hubiso run ahaanta isla.
Waxay ka caawiyaan helitaanka macluumaadka loo baahan yahay si loo helo saadaasha hawada. Xogta la helay, moodello tiro kala duwan ayaa loo adeegsadaa xisaabinta. Sidan oo kale, waa suurtogal in la bixiyo xogta si loo muujiyo saadaasha hawada.
Waxay u adeegaan inay ku abuuraan macluumaadka cimilada qaab wakiil ah meesha aan ku aruurino xogta.
Iyada oo aad ku abuuri karto digniino macluumaad ah oo ku saabsan dhacdooyinka saadaasha hawada oo saameyn ku yeelan kara ama xiiseyn kara. Tusaale ahaan, jiritaanka wejiga hore ee roobab suurtagal ah.
Waad ku mahadsantahay xogta la helay, isku xirnaanta ifafaalaha cimilada waa la samayn karaa kuwaas oo awood u yeeshay inay abuuraan xaalado khatar ah, shilal, iwm.
Macluumaad muhiim ah ayaa laga helayaa horumarinta dalagyada beeraha iyo ka hortagga burburka dalagga.
Noocyada xarunta cimilada
Rugta saadaasha hawada ayaa mas'uul ka ah cabirka tiro badan oo ka mid ah doorsoomayaasha cimilada. Waxaan la imaaneynaa liis iyaga ah:
Qiyaasta saacad fudud
Cabbiraadda dhererka daruurta
In kasta oo ay jiraan noocyo kala duwan oo saldhigyada cimilada ah, dhammaantood waxay caadi ahaan cabbiraan isku mid ama ku dhowaad isku mid. Sidoo kale waxay kuxirantahay midkasta tayada uu leeyahay. Waxaan falanqeyn doonnaa xarumaha ugu muhiimsan:
Saldhigyada cimilada gudaha
Iyagu waa kuwa loogu talagalay dadweynaha guud. Qiimaheedu waa mid jaban waana mid ka fudud qaababkiis. Maaha inay ku xirmaan aaladaha USB-ga waxayna cabiraysaa macluumaadka aasaasiga ah ee saadaasha hawada sida heerkulka, huurka, cadaadiska Hawada iyo roobka.
Xarumaha xiriirka PC
Sida magaca ka muuqata, waxay awood u leeyihiin inay kumbuyuutar ku xirmaan aaladda USB-ga. Xogtaan waa la dhoofiyaa waxaana lagu daawadaa Excel. Waxay ka mid yihiin kuwa ugu caansan taageerayaasha saadaasha hawada. Kuwani xoogaa way ka qaalisan yihiin kuwa gudaha maxaa yeelay waxay leeyihiin awood badan oo ay ku cabbiri karaan is-beddelka saadaasha hawada.
Waxay u cabirtaa sida kuwa gudaha laakiin waxay kaloo cabbiri kartaa indha-indheynta shucaaca qoraxda, jihada dabaysha iyo xawaaraha. Intaas waxaa sii dheer, waxay awood u leedahay inay ku siiso qiimayaasha qabowga iyo heerkulka dhibcaha sayaxa.
Xarumaha cimilada ee Wifi
Idaacadahaani waxay leeyihiin faa iidada tii hore waana ta ay awood u leedahay inay xogta ku gudbiso internetka si ay ugu awoodaan inay ku baahiyaan internetka. Xidhiidhku wuxuu noqon karaa Wi-Fi ama fiilo toos ah oo ku socda modemka. Astaamaheeda waxaa ka mid ah moodello shaashad leh, markaa way fududahay in la falanqeeyo xogta goobta ku taal. Waxay ka mid yihiin kuwa ugu caansan taageerayaasha ugu badan ee saadaasha hawada.
Saldhigyada cimilada ee la qaadan karo
Waa saldhigyo jeeb ah. Waxaa loogu talagalay inay awoodaan inay ururiyaan xogta xilliyada gaarka ah waxayna laxiriiraan waxqabadka howlaha banaanka. Waxaa jira qorshayaal badan oo loo joojiyo xaaladaha cimilada awgeed. Mahadsanid idaacaddan, Waad ogaan kartaa isbeddelada cimilada si aad u ogaato saadaasha roobka ama cimilada xun. Uma laha saxsanaanta saldhigga weyn, laakiin aad ayey faa'iido u leedahay.
Qalabkee buu leeyahay rugta cimilada
Si loo awoodo in la cabbiro dhammaan doorsoomayaasha, aaladaha cabbiraadda iyo qalabka saadaasha hawada ayaa loo baahan yahay. Waxaan ka faalooneynaa astaamaha qalab kasta iyo shaqooyinka ay leeyihiin:
Heerkulbeeg. Waxaan u maleynayaa inay tahay tan ugu cad, tan iyo haddii aan rabno inaan cabirno heerkulka waa lagama maarmaan. Heerkulka waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay doorsoomaha inta badan saameeya aadanaha.
Hygrometer. Waxaa loo isticmaalaa in lagu cabiro qoyaanka hawada iyo dhibcaha dharabka. Sidan oo kale, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ogaanno sida qoyaanku u saameeyo dareenka kuleylka waqti kasta, labadaba oo lagu daro kuleylka iyo qabowga.
Pluviometer. Looma baahna in la cabbiro roobka xilli kasta. Waxay na siineysaa xog muhiim ah oo ku saabsan roobabka mahiigaanka ah, beeraha iyo biyo-gelinta.
Cabbiraadaha. Ku habboon cabirka xawaaraha ay dabayshu ku socoto. Waa lagama maarmaan in la ogaado si loo ogaado waqtiga.
muraayad. Waa mida u adeegta tilmaamida jihada ay hawadu u dhacayso.
Barometer. Waxaa loo isticmaalaa in lagu cabiro cadaadiska Hawada. Waa mid kale oo ka mid ah doorsoomayaasha ugu muhiimsan ee la cabbiro. Waa mida tilmaamaysa isbeddelka waqtiga mahadnaqana waxaan ku ogaan karnaa haddii cimiladu sii fiicnaanayso ama ka sii darayso.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto xarunta cimilada iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Qalabka Saadaasha hawada » Saldhigga Cimilada
Badaha iyo badaha